एकले गरेको रक्तदानले ३० जनाको ज्यान बच्ने - Tesro Ankha
काठमाडौं । ‘रक्तदान जीवनदान’ भनेझैं रगत दान गर्नु कसैलाई जीवनदान गर्नुबराबर हो । एकजनाले गर्ने रक्तदानले तीनजनासम्मको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
रगत र यसका विभिन्न भाग कृत्रिम तरिकाले बनाउन नसकिने भएकाले स्वस्थ मानिसको रगत दानबाट मात्रै बिरामीको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । रक्तदान गर्ने मानिस आफूले रगत दान गर्नुअघि केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
के हो रगतको काम ?
सासबाट फोक्सोले लिएको अक्सिजनलाई रगतले शरीरको विभिन्न अंगमा पुर्याउने काम गर्छ । यसको साथसाथै शरीरको आन्तरिक क्रियाकलाप र वातावरण कायम राख्न पनि रगतले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । एक स्वस्थ वयस्क मानिसको शरीरमा लगभग पाँच लिटर रगत हुन्छ । रगतमा ५५ प्रतिशत प्लाज्मा र ४५ प्रतिशत रगतका कोशिका हुन्छन् ।
कसलाई रगत आवश्यक पर्छ ?
–दुर्घटनाका कारण धेरै रक्तस्राव भएको बिरामीलाई
–अपरेसन गर्दा धेरै रगत खेर गएका बिरामीलाई
–रक्तस्राव बढी भएका गर्भवतीलाई
–पाठेघरभन्दा अन्य भागमा बच्चा बस्ने र एबोर्सन गर्नेलाई
–विभिन्न किसिमको रक्तअल्पता, थालेसिमिया, क्यान्सर आदिका बिरामीलाई ।
कसले रक्तदान गर्न मिल्छ ?
–१८ वर्ष उमेर पुगेको, ५० केजीभन्दा धेरै तौल रहेको शारीरिक रूपमा स्वस्थ हरेक मानिसले रक्तदान गर्न सक्छन् ।
रक्तदान गर्नुअघि दाताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा
–रक्तदाताको उमेर १८ वर्ष पुगेको र तौल ५० केजीभन्दा माथि हुनुपर्ने
–रक्तदातालाई रगत दान गर्ने समयमा एचआईभी, हेपाटाइटिस, क्षयरोग आदि लागेको हुनुहुँदैन
–रक्तदातालाई रगत दान गर्ने समयमा क्यान्सर, मधुमेय, उच्च रक्तचाप आदि भएको हुनुहुँदैन
–रक्तदाताले रगत दान गर्ने समयमा एन्टिबायोटिक, रगत पातलो गर्ने औषधि आदि सेवन गरेको हुनुहुँदैन
–रक्तदाताको हेमोग्लोबिनको मात्रा १२.५ ग्राम प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ
–रक्तदाताको रक्तचाप र मुटुको चाल सामान्यभन्दा घटीबढी हुनुहुँदैन
–अघिल्लो रक्तदान गरेको तीन महिनासम्म अर्काे रक्तदान गर्नुहुँदैन
यसैगरी, रक्तदान गर्नुअघि कुनै स्वास्थ्य समस्या भए र केही जानकारी लिने इच्छा लागे उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिएरमात्र रक्तदान गर्नुपर्छ ।
रक्तदान गरेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा
–रक्तदान गरेपछिको करिब २० मिनेटसम्म आराम गर्नुपर्छ ।
–रक्तदान गरेपछि रिंगटा लागेमा, भाउन्न वा बेहोश भएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराइहाल्नुपर्छ ।
–रक्तदानपछि जोकोही बेहोश भएमा जुरुक्क उठाउनुभन्दा कोल्टे फर्काउनुपर्छ । सकेसम्म खुट्टा माथि उचालेर टाउकोलाई तल पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
–रक्तदान गरेपछि पानी तथा प्रशस्त झोल पदार्थ पिउनुपर्छ ।
रक्तदान गरेको २४ घन्टासम्म धेरै शारीरिक परिश्रम पर्ने काम गर्नुहुँदैन । रक्तदान गर्नाले रक्तदाताको स्वास्थ्यमा त्यस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । रगतले हाम्रो शरीरको तौलको ७ प्रतिशतमात्र ओगटेको हुन्छ । पाँच लिटर रगतमा करिब ३५० मिलिलिटरमात्र दान गर्ने गरिन्छ । करिब २४ घन्टाभित्रमा शरीरले त्यो रगतको मात्रालाई पूर्ति गर्न थाल्छ ।
२०७४ पुष २२ १९:४६